Vaovao - fampidirana pipa PE
Nampidirina pipa PE
PE dia plastika polyethylene, ny plastika tena ilaina indrindra, kitapo plastika, fonosana plastika sns, dia PE, HDPE dia avo lenta ny kristaly, resina thermoplastic tsy misy polar. Ny fisehoan'ny HDPE tany am-boalohany dia milky fotsy, misy ambaratonga translucency amin'ny faritra manify. Ny PE dia mahatohitra tsara ny ankamaroan'ny akora simika ao an-trano sy indostrialy.
Ny fantsom-pe dia manana fantsona polyethylene matevina ary fantsona polyethylene avo lenta. Mizara ho SDR11 sy SDR17.6 andiany araka ny hatevin'ny rindrina. Ny voalohany dia mety amin'ny fitaterana entona artifisialy gazy, etona voajanahary ary lasantsy misy solika, fa ity farany kosa ampiasaina indrindra amin'ny fitaterana entona voajanahary. Raha ampitahaina amin'ny fantsom-by dia tsotra ny fizotran'ny fanamboarana, manana fahalemena voafaritra tsara, ny zava-dehibe kokoa dia tsy ampiasaina amin'ny fitsaboana anti-harafesina, hamonjy fomba maro. Ny fatiantoka ny fitaovana dia tsy tsara toy ny fantsom-by, ny fananganana fiheverana manokana ny fiarovana ny hafanana fanafanana hafanana, ary tsy azo atrehana amin'ny rivotra amin'ny masoandro, ary mora tohina amin'ny zavatra simika, mba hisorohana ny fivoahan'ny fahasimban'ny fantson-drano maloto .
Tsenan'ny fantsom-pokonolona any Shina, ny fantsom-plastika dia mivoatra tsy tapaka, ny fantsom-bokatra PE, fantsom-pohy PP-R, fantsona UPVC dia misy toerana, ao anatin'izany NY firoboroboan'ny fantsom-pandrosoana PE no tena mahasarika ny maso. PE fantsona no be mpampiasa. Ny fantson-drano maloto sy fantsom-panafody no tsenan'ny fampiharana roa lehibe indrindra.
Ny fantsona tsara dia tsy tokony hanana toekarena tsara, fa hanana andiana tombony toy ny interface azo antoka sy azo antoka, ny fanoherana ny fiantraikany, ny fanoherana, ny fanoherana ny fahanterana ary ny fanoherana ny harafoana.
Tombony ho an'ny rafitra fantsona HDPE:
1. Fifandraisana azo itokisana: ny rafitra fantsona polyethylene dia mifamatotra amin'ny alàlan'ny fanafanana herinaratra, ary ny tanjaky ny fiarahana dia avo kokoa noho ny herin'ny vatan'ny fantsona.
2, ny fanoherana ny fihenan'ny maripana ambany dia tsara: ny hafanan'ny polyethylene maripana ambany dia ambany dia ambany, ary azo ampiasaina soa aman-tsara ao anatin'ny maripana amin'ny -60-60 ℃. Amin'ny fananganana ririnina, ny fantsona dia tsy hitresaka noho ny fanoherana tsara ny fitaovana.
3, fanoherana famoretana adin-tsaina tsara: HDPE dia manana fahatsapana ambany ambany, hery manety avo ary fanoherana ny fikorohana mafy, ny fanoherana ny fihenjanana amin'ny tontolo iainana koa tena miavaka.
4, fanoherana ny harafesina simika tsara: ny fantsom-pandrefesana HDPE dia mahazaka ny fahasimban'ny haino aman-jery simika isan-karazany, ny fisian'ny akora simika amin'ny tany dia tsy hiteraka fahasimban'ny fantsona. Polyethylene dia insulator elektrika, noho izany dia tsy ho lo, harafesina na harafesina elektrokimika; Tsy mampiroborobo ny fitomboan'ny ahidrano, bakteria na holatra koa izany.
5, fanoherana fahanterana, androm-piainana maharitra: fantsona polyethylene misy fizarana 2-2.5% black black karbonika azo tehirizina eny ivelany na ampiasaina mandritra ny 50 taona, tsy ho simban'ny taratra ultraviolet.
6, fanoherana fanoherana: NY fanoherana fanoherana ny fantsona HDPE sy ny fanandramana fampitahana fantsom-by dia mampiseho fa ny fanoherana anaovan'ireo fantsona HDPE dia inefatra noho ny fantsom-by. Amin'ny fitaterana fotaka, ny fantsom-panafody HDPE dia manolotra fanoherana mitafy tsara kokoa raha oharina amin'ny fantsom-by, izay midika fiainana lava kokoa sy toekarena tsaratsara kokoa.
7. Fahafahana manara-penitra: NY malefaka amin'ny fantsona HDPE dia manamora ny hiondrika, ary ny sakana dia azo esorina amin'ny fanovana ny làlan'ny fantsom-panafody amin'ny injeniera. Amin'ny tranga maro dia afaka mampihena ny fatran'ny fantsona ny fantsom-pifanentanana ary mampihena ny vidin'ny fametrahana.
8. Fanoherana ambany: ny fantsona HDPE dia manana faritra anatiny milamina ary coefficient an'ny Manning 0,009. Ny fampisehoana malefaka sy ny toetra tsy mifatotra amin'ny fantsona HDPE dia miantoka ny fahafaha-mitatitra avo kokoa noho ny fantsona mahazatra, ary mampihena ny fahaverezan'ny tsindry sy ny fanjifana rano.
9, mora raisina: maivana kokoa ny fantsom-panafody HDPE noho ny fantsom-betonika, fantsom-boaloboka ary fantsom-by, mora ny mitantana sy mametaka, mampihena ny filan'ny mpiasa sy ny fitaovana, midika izany fa mihena be ny vidin'ny fametrahana ny tetikasa.
10, isan-karazany ny fomba fanamboarana vaovao: ny fantsom-panafody HDPE dia manana teknolojia fananganana, ankoatry ny fomba fitrandrahana nentim-paharazana dia azo ampiasaina amin'ny fananganana, afaka mampiasa karazana teknolojia vaovao tsy misy trenchless toa ny jacking pipe, drilling directional, liner, amin'ny endrika fantsom-panafody sy fananganana, ho an'ny sasany dia tsy mamela ireo tranokala fitrandrahana, no hany safidy, noho izany ny fantsom-panafody HDPE malalaka kokoa.